Warbixinta Sahanka Dhallinyarada: Aqoonta Dhallinyarada & Xiisaha Waxbarashada Nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
January 13, 2022 Research, Dhalinta diirada la saaray 1
Aqoonta Dhalinyarada & Xiisaha Waxbarashada Nabadda
Bishii Abriil 2021, Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda (GCPE) ayaa sameeyay sahan diirada saaraya dhalinyarada si loo fahmo wacyiga iyo xiisaha waxbarashada nabadda iyo cadaalada ee dhalinyarada dugsiyada sare iyo kuwa kuleejka. Warbixintani waa natiijada ka soo baxday ololaha caalamiga ah iyo falanqaynta. Ugu dambayntii, GCPE waxa ay rajaynaysaa in warbixintani ay ku siin doonto aragti ku saabsan wacyiga dhalinyarada iyo xiisaha waxbarashada nabadda si loo kordhiyo hawlgelinta dhalinyarada.
Sahanka Dhallinyarada ee Waxbarashada Nabadda iyo Caddaaladda Bulshada waxaa fuliyay Ololaha Caalamiga ah ee Kooxda Dhallinyarada Waxbarashada Nabadda, oo ka kooban ardayda ugu horrayn ee Barnaamijka Barashada Caddaaladda iyo Nabadda ee Jaamacadda Georgetown. Xubnaha kooxda waxaa ka mid ah: Keaton Nara, Caelan Johnston, Maude Peters, Heather Huang, iyo Gabby Smiley. Warbixinta iyo falanqaynta waxaa kormeeray Micaela Segal de la Garza, Maareeyaha Barnaamijka, iyo Tony Jenkins, Iskuduwaha Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda.
Ololaha Caalamiga ah ee Kooxda Dhallinyarada Waxbarashada Nabadda waxay la socotaa jawaab-bixiyeyaasha sahanka si ay u sahamiyaan horumarinta isku xirka dhalinyarada waxbarashada nabadda.
Natiijooyinka iyo talooyinka muhiimka ah ayaa lagu soo saaray hoos. Faah faahin dheeri ah iyo falanqeyn kala deg warbixinta oo dhameystiran.
Soo deji Warbixinta oo Dhamaystiran
Natiijooyinka Muhiimka ah
Marka la eego mashaariicda iyo barnaamijyada waxbarashada nabadda ee jira, jawaab-bixiyeyaashu waxay muujiyeen heerarka ugu sarreeya ee xiisaha ka hortagga rabshadaha, xuquuqda aadanaha, horumarinta caalamiga ah, dhalashada caalamiga ah, iyo rabshadaha jinsiga.
Jawaab bixiyaashu waxay muujiyeen qadarka ugu yar ee wacyiga ku saabsan ka fiirsashada iyo dhaqamada soo celinta.
Waxaa jiray xiiso xooggan oo loo qabo caddaaladda bulshada, gaar ahaan marka la eego arrimaha xadgudubyada jinsiga, argagixisada, iyo rabshadaha jinsiyadda, kuwaas oo dhammaantood loo aqoonsaday inay yihiin maadooyin muhiim ah oo ka kala yimid kooxaha tirakoobka.
Marka loo eego tirakoobyada da'da kulleejyada adduunka - labadaba diiwaangashan oo aan ka diiwaan gashanayn barnaamijyada daraasadaha nabadda - kala qaybinta siyaasadda ayaa ahayd mawduuca ugu sarreeya ee xiisaha mashaariicda iyo barnaamijyada caddaaladda bulshada.
Marka la eegayo xiisaha tababarka dhalinyarada, sahanku wuxuu ogaaday in jawaab-bixiyeyaashu ay muujiyeen, celcelis ahaan, heerka ugu sarreeya ee xiisaha xarumaha hal-abuurka (tusaale, fursadaha lagu keeno fikrado cusub iyada oo loo marayo muujinta hal-abuurka)
Inta badan jawaab bixiyaasha, iyadoon loo eegin da'da, goobta, ama diiwaangelinta barnaamijyada waxbarashada nabadda, waxay barteen barnaamijyada waxbarashada nabadda iyo mashaariicda dugsiga ka baxsan. Waxaa jirta waxbarasho nabadeed oo rasmi ah oo aan si gaar ah uga jirin dugsiyada in kasta oo la dareemayo xiiso.
Talo soo jeedin: Taageer horumarinta fursadaha waxbarashada nabadda ee dugsiyada wax ka qabta danaha ardayda; in ardayda lagu kordhiyo xirfado si ay ugu doodaan barnaamijyada waxbarashada nabadda (wax jawaab-bixiyeyaashu ay muujiyeen xiiso xooggan).
Barashada nabadda asal ahaan waa mid ay bulshadu wadato, waana sida saxda ah dhinaca wadaagga ah ee ay dhallinyaradu u muuqato in ay aad u xiiseeyaan.
Talo soo jeedinIn la sameeyo naadiyada dugsiyada kuwaas oo baraya ardayda wax ku saabsan waxbarashada nabadda isla mar ahaantaana u abuura meel bannaan oo lagu sameeyo xiriirka bulshada; keeni waxbarashada nabadda xarumaha bulshada; bixinta waxbarashada nabadda barnaamijyada dugsiga ka dib.
Siinta fursadaha dhalinyarada si ay uga qaybqaataan waxbarashadooda ayaa ah muhiimada ugu badan.
Talo soo jeedin: Barnaamijyada waxbarashada nabadda iyo nuxurka waa in laga soo min guuriyaa loona habeeyaa si ay u daboolaan danaha caddaaladda bulshada ee ardayda ee ma aha oo kaliya danaha macallimiinta / macalimiintooda.
Baraha bulshada ayaa si cajiib ah muhiim ugu ah barnaamijyada dhalinyarada iyo ka qaybgalka bulshada. Instagram, Facebook, Twitter, iyo wargeysyada ayaa u soo baxay inay yihiin aaladaha loogu isticmaalka badan yahay jawaab-bixiyeyaasha.
Talo soo jeedin: Abuur baraha bulshadu ku wada xidhiidho ee dhalinyarada; abuuraan qoraallo soo jiidanaya mawduucyada gaarka ah ee waxbarashada nabadda ee ay muujinayaan xiisaha; jawaab-bixiyeyaashu waxay muujiyeen, celcelis ahaan, heerka ugu sarreeya ee xiisaha goobaha hal-abuurka leh ee loogu talagalay tababbarka diiradda saaraya dhalinyarada, iyo warbaahinta bulshadu waa dhexdhexaad aad u fiican tan.
Jawaab bixiyaal badan ayaa muujiyay xiisaha ay u qabaan shabakad cusub oo diiradda saareysa dhalinyarada, in kasta oo diiwaangelinta barnaamijka daraasaadka nabadda ay guud ahaan muujinayso heerka xiisaha.
Talo soo jeedinSamee shabakad cusub oo diiradda saaraysa dhalinyarada oo loogu talagalay kuwa danaynaya inay ka qaybgalaan oo ay xidhiidh la yeeshaan midba midka kale.
U doodista Waxbarashada Nabadda
GCPE-da ayaa xiiso gaar ah u leh ardaydu inay awood u yeeshaan inay u doodaan manhajkooda iyo waxbarashadooda. Ka mid noqoshada dhalinyarada ee go'aan qaadashada ayaa ah muhiimada ugu badan, waana sababta jawaab bixiyaasha la waydiiyay xiisaha ay u qabaan barashada xirfadaha si ay ugu doodaan waxbarashada nabadda ee dugsiyadooda iyo bulshooyinkooda. Guud ahaan, jawaab-bixiyeyaashu waxay muujiyeen heerar sare oo xiiso leh barashada xirfadaha u doodista waxbarashada nabadda iyadoo celceliska jawaabta kooxuhu ay yihiin 3.6 iyadoo 5 ay tahay heerka ugu sarreeya ee xiisaha. Isbeddelladan waxaa lagu muujiyey garaafka hoose:
PeaceBoat US, Waxbarashada Nabadda & Yoolalka Horumarka Waara ee Latin America (Xagaaga 2017 Safarka), Laba Deeqo Ayaa La Heli Karaa
April 13, 2017 Fursadaha maalgelinta, Dhalinta diirada la saaray 0
Peace Boat US waxay siineysaa laba deeq waxbarasho "Dhallinyaro Waxqabad u leh SDGs" barnaamij barasho xagaagan oo loogu magac daray "Waxbarashada Nabadda iyo Yoolalka Horumarka Waara (SDGs) ee Latin America." Barnaamijkan gaarka ah wuxuu ka dhici doonaa markabka Peace Boat sida uu u booqanayo Panama, Nicaragua, iyo El Salvador laga bilaabo Juun 20 - July 3, 2017. [sii wad akhriska…]
Sidee dhalinyarada u jabin karaan meertada rabshadaha
Waxaa laga yaabaa 19, 2017 Warar & Muuqaal 0
Forest Whitaker waxay leedahay markii si fudud loo kala jabiyo shixnadaha si joogto ah loogu badalo dhacdooyinka rabshadaha ee dagaalada hubeysan, kama hadli karno nabada dhabta ah ama isbadalka dhabta ah [sii wad akhriska…]
Ficil u samee Maalinta Caalamiga ee Dhallinyarada 2017! Barnaamija Cusub ee Nabadeynta Dhalinyarada ee Nabadeynta Barnaamijka!
August 12, 2017 Digniinta Waxqabadka, Dhalinta diirada la saaray 0
Si loo sharfo maalintan Akadeemiyada Nabadda ee Qaranka waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo barnaamij cusub oo ku saabsan dib-u-dhiska nabadda: Dhalinta Mareykanka! [sii wad akhriska…]
Ajay Singh wuxuu leeyahay,
February 10, 2022 at 10: am 37
Su'aalo badan oo qalafsan ayaa wajahaya hoggaanka adduunka iyo dhammaan hoggaamiyeyaasha diinta ee u harraadsan in si wadajir ah loo soo gabagabeeyo amniga caalamiga ah ee xaaladda cakiran ee fidinta nukliyeerka iyada oo la eegayo xiisadda akhlaaqda ee anshaxa siyaasadda iyo khilaafaadka diimeed.
Waqtigan xaadirka ah tacliinta, hay'adaha iyo hay'adaha maamulka waxay u heellan yihiin oo kaliya inay wax ka qabtaan qaabka dhibaatooyinka; iyada oo la iska indho tiray dhinacyadeeda taban ee maalinba maalinta ka dambaysa sii kordhaya caqabad adag oo hortaala caalamka oo dhan. Waxaan ula jeednaa gudaha saameynta caalamiyeynta iyo isbeddelka farsamo ee degdegga ah, maanta waxaan arki karnaa sida musuqmaasuqa iyo sinnaan la'aanta ay kor ugu qaaddo walaac dhaqaale oo ay wiiqdo wadajirka bulshada, xuquuqda aadanaha iyo nabadda oo xannibaysa kalsoonida dadweynaha guud ahaan.
Duruufahaas gudahooda, waxbarashada ku salaysan qiyamka asaasiga ah ee SDG 4.7 ayaa ah qalabka ugu wanaagsan ee lagu qeexi karo aaladaha siyaasadeed iyo kuwa xirfadeed ee casriga ah ee aan ugu baahanahay waxqabad isku dhafan si loo gaaro Ajendaha 2030ka. Intaa waxaa dheer fikradayada ah in la horumariyo SDG 4.7 waxay si qoto dheer u haysaa fikradda asaasiga ah si ay u hagto bulshada caalamka si ay u qaataan SDG 16.a hal fikrad, horumarinta nabadda iyo rabshadaha iyo qadarinta dhaqamada ka qaybqaata horumarka waara. Runtii, nabad iyo midnimo caalami ah la'aanteed, suurtogal maaha in hoggaanka adduunku uu fiiro gaar ah u yeesho guusha SDGs waqtigeeda.
Waqtigan xaadirka ah damiirka jiilkayaga da'da ah ee u dhexeeya 10 ilaa 29 da'da ayaa si gaar ah u nugul, loo isticmaalo nooc kasta oo rabshado ah waana caqabada ugu weyn ee caalami ah oo u baahan "gabagabo loo dhan yahay" si loo horumariyo jiilka mustaqbalka iyo si looga hortago kobcinta Nukliyeerka dhabta ah. xaqiiqda.
Waxaa intaa ka badan, farqiga u dhexeeya iyo farqiga u dhexeeya waxbaristeena diineed ayaa ah mid siinaya dhul ammaan ah ganacsiga cunsuriyadda iyo xagjirnimada taas oo sii xumaynaysa saldhigga dagaalka iyo argagixisannimada iyaga oo iska indha tiraya qaabka dilaaga ah ee faafinta nukliyeerka iyada oo loo eegayo mawqifyada siyaasadeed iyo mawqifyadooda. Sidaa darteed, aasaaska dagaalka iyo argagixisanimada ayaa weli ah mid aan laga adkaan hoggaanka adduunka iyo dhammaan cilmiga diinta ee hormuudka ka ah kuwaas oo la halgamaya astaanta nabadda iyo kala duwanaanta dhaqanka ilaa hadda. Intaa ka dib duruufahaas lacagta adduunku iyo awoodda qorigu kuma filna inay la dagaallamaan fikradaha cunsuriyadda, xag-jirnimada iyo argagixisanimada oo dembiyadooda ku qarinaya naxwaynta diinta.
Kuwani waa xaqiiqooyin dhab ah oo aan la iska indho tiri karin qiimo kasta. Arintan, bulshada adduunku waxay u baahan tahay hal-abuur aqooneed (suugaan) si ay dib ugu qeexdo damiirka jiilkeena soo koraya ee xamaasadda leh ee caqiidada (waxbarashada diinta), dhaldhalaalka dhulka iyo dhinacyada dilaaga ah ee niyad-jabka, isla markaana ay kobcinayaan xirfadahooda xirfadeed. Tani waa waxa aan ula jeedno qeexitaanka "UN-SDG 4.7", oo ah habka kaliya ee lagu caawinayo bulshada adduunka si ay u gaaraan "UN-SDG16.a" dhab ahaantii.
Hadda buugaagta iyo suugaanta qoraayaasha waaweyn ee adduunka oo dhan ee ku taliyay "daabacaadda dugsiga ee aan la soo koobi karin" waxay inta badan u socdaan damiirka jiilka cusub adduun aan qarsooneyn oo ka baxsan maskaxdooda si ay u horumariyaan kala duwanaanta dhaqameed ee aan u baahanahay inaan dhisno. "adduunyo cadaalad ah". Shaki kuma jiro, waxay ka dhigan tahay fikradaha waaweyn ee la xiriira xaalad hore iyo hadda, laakiin iyada oo aan la helin xal sax ah oo aan u baahannahay inaan horumarinno kala duwanaanta dhaqameed ee dhabta ah. Waxay u adeegtaa sida maaweelo loogu talagalay horumarinta akhlaaqda xadka iyo sidoo kale waxay ka caawisaa ardayda inay horumariyaan xirfadahooda isgaarsiinta. Halkan waxa aan soo jeedinaynaa waa kordhinta fikraddaas iyada oo la horumarinayo nimcooyinka suugaanta ee madadaalada iyo wacyigelinta labadaba, sababtoo ah maanta guulaha xirfadeed, siyaasadeed iyo cilmi-baarista cilmi-nafsiga ayaa dib u soo nooleynaya oo ka baxsan geeddi-socodka dabiiciga ah iyo nimcooyinka aadanaha iyo ruuxa ayaa hoos u dhacaya godka halista ah, iyo abuurista aasaaska cunsuriyadda, xagjirnimada, dulqaad la'aanta iyo dhibaatooyinka kale ee bini'aadantinimo sida caqabadaha waddada si loo dhiso kalsoonida dhammaan dhaqamada, caadooyinka iyo kuwa kale, in aan u baahannahay inaan horumarino kala duwanaanta dhaqameed si aan gacan uga geysanno guusha dhammaan waara. yoolalka horumarineed.
Mashruucayagu waxa si gaar ah loogu qaabeeyey xarumaha tacliinta, si loo gudbiyo aasaaska iftiiminta iyada oo la adeegsanayo maaweelo iyo muujin. Waxay ka dhigan tahay tijaabinta suugaanta Ingiriisiga si ay ugu ururiso wakhtiga akhristaheeda iyadoo leh sharraxaad wax ku ool ah iyo sahaminta lagama maarmaanka ah kelmado kooban gudahood. Mabda'a dawladeed waxa uu keenaa sayniska iyo iimaanka si ay u midoobaan dhammaan aadanaha oo dhan oo aan ahayn oo kaliya xuduudaha diinta, xuduudaha, iyo kala duwanaanshaha; laakiin sidoo kale aragtiyaha siyaasadeed si loo iftiimiyo aasaaska cilmiyeed ee nolol wax ku ool ah iyo in la muujiyo sida maskaxda wanaagsan iyo wanaaggu kor ugu qaadaan nolosha shakhsiyaadka iyo, ugu dambeyntii, fayo-qabka bulshada.
Ujeeddadeenu ma aha oo kaliya in aan mideyno jiritaanka bani-aadmiga oo ay kala soocaan kala qaybsanaan diimeed iyo tartan, laakiin sidoo kale in aan kor u qaadno dhammaan qeexitaannada iimaankeena hal fikrad, fikrad, iyo fikrad ka baxsan hababka fekerka ee aan dhaxalka u leenahay si aan kor ugu qaadno wada-xaajoodka cilmi-baarista waxay meesha ka saartaa ruuxnimada. Waxaa loogu talagalay, si daacad ah, mideynta jiritaankeena oo ku saleysan aasaaska nabadda-ma aha tartan, dood, ama muran.
Waxaan aaminsanahay, dhammaantiin waxaad ku faraxsanaan doontaan inaad fiiro gaar ah u yeelataan qaadashada fikraddayada la soo jeediyay maadaama aan u baahanahay inaan gaarno hadafyadayada dhabta ah. Mahadsanid